Kedu ihe Mmelite Mgbasa Ozi Mgbanwe Ọhụrụ nke Google pụtara maka Mgbasa Ozi AdWords? | Martech Zone
Google kwekọrọ na mgbanwe. Ya mere ọ nwere ike ịbụ na ọ bụghị ihe ijuanya na na August 29th, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara mgbanwe ọzọ na ntọala ha na mgbasa ozi n'ịntanetị, kpọmkwem na ntụgharị mgbasa ozi. Ezigbo ajụjụ bụ - gịnị ka mgbanwe ọhụrụ a pụtara nye gị, mmefu mgbasa ozi gị na arụmọrụ mgbasa ozi gị?
Google abụghị onye na-enye ọtụtụ nkọwa mgbe ha mere mgbanwe ndị dị otu a, na-ahapụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche n'ọchịchịrị ka esi aga n'ihu. Olee otú a ọhụrụ mgbanwe n'ezie mmetụta mgbasa ozi gị?
Ihe ị ga-atụ anya ọdịda a: Algọridim ndị e mere ka ọ dịkwuo mma
N'ihe banyere algọridim ya dị omimi, Google zoro aka na nlebara anya dị arọ ngwa igwe, nke bụ kpọmkwem ihe ọ na-ada ka. Dị ka Google si kwuo, usoro ọhụrụ a ga-emepụta data ka mma maka ịchọpụta mgbasa ozi ndị kachasị mkpa. Ngwaọrụ igwe dị ike ma dịkwa ire, mana n'ihi na ọ ka bụ echiche ọhụụ, ọ gaghị enwe ntụpọ ya - dịka ọmụmaatụ, Google na nso nso a ghagburu ndebiri nke "hp" (nke dị mkpirikpi maka ịnyịnya ibu) dịka ọ na-ekwu maka nnukwu ụlọ ọrụ ahụ Hewlett Packard (HP), n'ihi na igbochi ụfọdụ "hp" na mgbasa ozi na echiche nke ụghalaahịa ịda iwu.
Na ndị dị otú ahụ emehie ka na-ewere ọnọdụ, ọ dịghị mkpa ka kwa ụjọ "igwe ịrị elu" - ma ọ dịghị ihe ọzọ ma. Otú ọ dị, ihe anyị kwesịrị ịma bụ na otu "igwe mmụta" a nwere ike ịbụ (na-adịghị mma) na-emetụta arụmọrụ mgbasa ozi gị (ịpị elu, ntụgharị dị ala) ma na-erite uru Google na ego.
Ozi Google, kọwara
Na ozi Google nke August 29th nye ndị ahịa niile AdWords, ha kwuru na ọ ga-abụ naanị nhọrọ ntụgharị mgbasa ozi abụọ dị: “ebuli” na “bugharia mgbe ebighi ebi.” Na-ebuli, ha na-ekwu, ga-eji mmụta igwe iji mepụta mgbasa ozi ndị e buru amụma na ha ga-arụ ọrụ nke ọma karịa ndị ọzọ na mkpọsa gị, ebe nhọrọ "na-agagharị mgbe ebighi ebi" chọrọ obere nkọwa - mgbasa ozi ga-egosipụta nke ọma, na-akaghị aka.
Ọ bụ ezie na nke a yiri ka ọ bụ ihe doro anya na mbụ, ọ na-ewelite ọtụtụ ejighị n'aka: nke mbụ, na-ekwu maka ntọala "ebuli", kedụ ihe kachasị mma? Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ha bụrụ ihe kacha mma na mgbasa ozi AdWords ọ bụla, na ha niile dị mkpa - sitere na ọnụahịa mgbasa ozi, ọnụ ọgụgụ clicks, ọnụego ntụgharị, ma ọ bụ ROI - ha niile na-eweta nsonaazụ pụrụ iche maka itinye ọkwa, mmuta, na mkpokọta ihe ịga nke ọma.
Anyị chọrọ azịza, anyị chọrọ ya ugbu a. Ya mere, anyị weliri ekwentị wee kpọọ Google. Gịnị bụ azịza ha? Na-ebuli elu bụ okwu isiokwu, dabere na netwọkụ akọwapụtara na-etinye n'ọrụ: Chọọ na Ngosiputa (rịba ama: Network Search bụ mgbasa ozi ederede na-egosi na nchọta google, ebe mgbasa ozi Ngosiputa bụ mgbasa ozi onyonyo gosipụtara n'ofe ịntanetị). Anyị mụtara na naanị ihe kachasị amasị na Network Search bụ clic, nke na-abụghị nnukwu akụkọ. Ha kwuru na ha na -achọgharị ntụgharị maka mgbasa ozi Ngosiputa.
Ihe mbụ anyị chere? Maka ọchụchọ ahụ, nke a enweghị uche nke uche. N'ihi gịnị? N'ihi na Nchọgharị Nchọgharị Google mara maka iweta ọtụtụ ọnụọgụ (pịa njikarịcha ka ejikọtara naanị naanị nleta saịtị na ọnụahịa ndị ọzọ). Maka Ngosipụta Ngosiputa, nke a nwere ike ịbụ ezigbo ihe. Ngosipụta ngosi gosipụtara ugbu a maka inwe ọnụego ntụgharị dị oke ala, ezi uru ha na-eweta site na iweta mmụba nke mmata, nke na-eweta ihe ize ndụ nke ịkwụ ọtụtụ maka clicks maka ntụgharị ole na ole. Yabụ, ọ bụrụ na mgbanwe ndị kachasị mma pụtara Network Ngosipụta na-aga nke ọma, nke a bụ nsonaazụ dị mma - mana omume na-ekwu okwu karịa okwu, yabụ nke a bụ ihe anyị ga-enyocha nke ọma.
Etu ụlọ ọrụ gị kwesịrị isi meziwanye mmelite ndị a
Dị ka ihe ọ bụla na ndụ, ọ na-esiri ike ịma jijiji n'ezie ihe ewuru ntọala siri ike. Otu ihe a metutara mmelite Google ọhụrụ AdWords. Ọ bụrụ n’inweela ezigbo mgbasa ozi ad, ọ gaghị emebi emebi. Mana enwere ole na ole ị ga - eme iji hụ na ego mgbasa ozi gị ga - ekwe omume yana mgbanwe ndị na - echere.
Nke mbụ n'ime ndị a bụ ileba anya nke abụọ na mkpọsa gị atụmatụ ọnụ ọnụ. E nwere ọtụtụ bidding atụmatụ na AdWords na kwesịrị na-uru nke iji hụ na ihe ịga nke ọma mkpọsa, karịsịa ugbu a na data si dị otú ahụ bidding azịza ga-tinye n'ọrụ ọbụna karị site na-abịa "igwe mmụta." Njirimara ndị a gụnyere mmụba a na-akwụ ụgwọ, ntinye ego na nkwụghachi ụgwọ, mmụba kachasị elu, ma ọ bụ nnweta ego.
Ihe ọzọ ị ga - atụle bụ ugboro ole ị na - eme mkpọsa gị enyocha site n'aka mmadụ n'ezie maka ịdị mma na izi ezi. Nke a dị mkpa iji kpochapụ mgbasa ozi ndị na-adịghị arụ ọrụ na iji mekwuo ndị na-arụ ọrụ dị elu (ndị nwere ụgwọ ntụgharị dị ala, ọnụ ọgụgụ dị elu, na ROAS kacha mma). Jiri okwu okwu mgbasa ozi gị gwuo egwu iji hụ ihe na-adabara ndị na-ege gị ntị. Na-anwale ule A / B ole na ole iji hụ ụzọ aghụghọ kachasị nwee ọganiihu, mana ịme ya mgbe ị na-edebe mgbasa ozi na-aga nke ọma ma na-agba ọsọ n'oge niile.
Nyocha akwụkwọ ntuziaka ndị a na-arụ ọrụ naanị, ma ọ bụrụ na ha emee ya nke ukwuu mgbe niile. Agbanwe agbanwe bụ isi mgbe ị na-azụta mgbasa ozi AdWords na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na ịnweghị ịlele akaụntụ ahụ mgbe niile, ịnwere ike ịhapụ ọkọlọtọ na-acha uhie uhie na-emebi oke ọnụọgụ mgbasa ozi ahụ. Ọzọkwa, ihe omume mpaghara (ọdachi ndị na-emere onwe ha, ọgba aghara obodo - gịnị enweghị anyị hụrụ n'oge na-adịbeghị anya?) Nwere ike inwe mmetụta na arụmọrụ nke mgbasa ozi gị. Ga-anọrịrị n’elu mgbanwe ndị a.
Na nchịkọta, nke a abụghị oge mbụ Google tụbara ụdị ihe a na ndị mgbasa ozi, ma eleghị anya ọ gaghị abụ nke ikpeazụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe kpatara ụjọ, ị kwesịrị ịnara ndụmọdụ Google ka ị zere iji nnu mee ihe - n'ihi na ọ ga - abụ ndị na - emejọ ihe na - eme nke kachasị mma na ọnwa ndị na - abịanụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ na mpụga na-elekọta akaụntụ gị, ha kwesịrị ịdị na-eme atụmatụ maka etu ị ga-esi merie mmelite a ma mee nke kachasị mma. Ndị otu na Nyocha Techwood ghọtara na mmelite Google nwere ike ịnwe nnukwu nsogbu, ha ga-aga n'ihu na-enyocha ha kwa ụbọchị. Echerela ruo mgbe oge gafere - gbaa mbọ hụ na gị na ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ ga - ahụ maka mgbasa ozi gị ga - adị njikere maka mgbanwe na - abịanụ taa.
Tags: njikarịcha mgbasa oziad adiananjighari mgbasa ozinjikarịcha adwordsalgọridim ad googlegoogle adwordsalgọridim googlengwa igweAdwords ppcppc njikarịcha
Chad Crowe sonyeere Nyocha Techwood na 2016 dị ka akụkụ nke mmakọ. Ugbu a, ọ na-ejikwa arụmọrụ Techwood na njikwa njikwa akaụntụ. Ọ nwere akara ugo mmụta bachelọ na Mahadum Reinhardt yana Master's Degree na Troy University na Communications. Kemgbe ọtụtụ afọ, Chad ejirila ihe karịrị nde $ 25 na mgbasa ozi ọchụchọ akwụ ụgwọ.
Ejiri Techwood Consulting na 2008 ma bụrụ ọkachamara ndụmọdụ dijitalụ nwere ọgụgụ isi na nyocha na nyocha. Otu onye Inc5000 maka 2017, nke isi ya na Atlanta, GA, ya na ndị otu 17 na-akwado ndị ahịa 60, Techwood nwere aha ọma maka igbu egbu na mpaghara SEO na PPC.
Ahịa Podcast: Gịnị kpatara Companlọ Ọrụ Ji etinye Aka na Podcasting